Apple Music Store FAQ: Wax walba oo aad u baahan tahay inaad ogaatid
"Jidadkiisa oo dhammu aad u jecel music. Dhammaan hal meel "- xigasho ka shirkad ku habboon yahay in lagu qeexo ah Apple Music Store. Dukaanka aad bixisaa wax walba oo aad rabto in aad la xiriira in Music Apple. Waxaad u taraynin kartaa adeegga Times, helitaanka maktabadda Mac ee dhex qalab kasta oo iyadoo la kaashanayo iCloud ku Music Library , playlist curated oo xaqiiqo ah 24/7 xarun raadiye oo had iyo jeer waa uu jiro si aad u madadaalada. Waxaa sugan in adeegyada sida ay muhiim tahay, laakiin sidoo kale adag waqti isku mid ah u set qaar ka mid ah dadka isticmaala. Haddii aad hesho adeegyada music, kuwaas oo in ay sir ah oo ay adag tahay in la fahmo, fadlan maraan, kuwaas oo ah FAQ. Su'aalaha Kuwaas oo hubaal ka dhigi lahaa khibradda aad u dhibaato Apple Music lacag la'aan ah oo sahlan in ay la tacaalaan.
1. Maxaad ula jeeddaan u-Apple Music?
Apple Music waa dhan oo ku saabsan geeyo digital aad music doorbidayso, maktabadda Apple Music iyo saldhigyada si fiican u soo xulay radio digital (oo ay ku jiraan warbaahinta 24/7 Beats 1). Apple Music barbaro ilaha ay ka music laba meelaha - kuwaas oo aad maktabadda Lugood iyo CD-dooxay , iyo marka labaad ka badan 30 milyan oo songs in waxa laga heli karaa maktabadaha Apple Music. Waxaad samayn kartaa wax kasta oo aad rabto in aad heeso. Waxad abuuri kartaa waa qaraw annaguna ama xidhmo gabayo la doortay adiga oo isticmaalaya ku Apple ee offline iyo sidoo kale adeegyada playlist online. User ayaa ka mid ah liiska geeyo u dooran karaan isaga / iyada artist jecel koox Apple ee editor music ayaa xaqiijiyay in ay sii magacyo fiican, ee liiska. Waxaa jira helitaanka ah 24/7 idaacadaha iyo waxa kale oo aad ka heli saldhigyada raadiyaha i-habayn kartoo. A il warbaahinta bulshada ugu baaqay Connect waxaa loo isticmaali karaa by fanaaniin ah.
2. Waa maxay sababta Apple isku dayayaan in ay muhiimadda ay leedahay in ay adeeg music geeyo siin?
Apple doonayo inuu ku bixiyo dareen ah in aad dhagaysanayso music ka maktabad kuu gaar ah shakhsi. Haddii aad fursad u leeyihiin in ay dhagaystaan ​​mid Fanaanada ama ku sifayn gaar ah, waxay u badan nasashada iyo sasabasho. Iyada oo taageero ka qayb geeyo ah, Apple si fudud isku dari kartaa music aad hore u leedahay, iibsaday ama music ah uploaded oo wuxuu ku raaxaysan music dardargelisay.
3. Ma Apple Music bixiya adeeg lacag la'aan ah?
Markii hore, Bilow ah, Apple waxay bixisaa adeeg bilaash ah oo saddex bilood kasta phone-i, i-xilkii guddoomiyenimo, Mac, i-suuf ama PC. Post saddex bilood in aad bixiso $ 9.99 / bishii adeegyada. Marka aad saxiixdo, waxaad xaq u leedahay lacag la'aan ah dacwadda iyo saddex bilood ka dib waxaad u baahan doontaa si aad u cusboonaysiiso adeegga la Times ah la bixin.
4. Waa maxay goobaha sameeya Apple dalab ku saabsan kor u saxiixay?
On ilaa saxiixa aad u hesho adeegyada saddex bilood oo lacag la'aan ah. Haddii aadan haysan Times lacag, waxa laguu oggol yahay in ay dhagaystaan ​​wax kasta oo music aad soo iibsatay, uploaded iyo dooxay si qalab aad iyo haddii heshiiska, Waxaad dhegaysan kartaa heesaha oo dhan iyadoo aan loo eegin in xaqiiqda ah in song waa in aad qalab ama aan. Waxaad ka abaalmarinayn adeegyada Beats 1 radio, il Connect, saldhigyada Apple Music Radio laakiin gabayo xadidan. Iyadoo Times aad ka heli songs aan xad lahayn, goobaha in uu ka hadlo, ciyaaraha iyo xataa badbaadiyay content Connect iyo dar heesahaaga maktabadda oo wuxuu ku raaxaysan offline music sidoo kale oo badan.
5. Maxaa dhici doona haddii aan heshiiska ka dib markii adeeg saddexda bilood ah oo lacag la'aan ah?
Ma awoodi doonaan inay ku ciyaaraan music wax geeyo in aad ku daray ka hor inta uusan si aad maktabadda ka soo saarney Apple Waxaad. Ma isticmaali karaa adeeg Connect. Haddii aad leedahay i-Gurtida Kulanka firfircoonaan, ka dibna kaliya waxaad awoodi doontaa in aad hore u sii qulquli uploaded oo iibsaday music, laakiin geeyo waa la samayn karaa oo kaliya in qalab aad, haddii kale ma tarayso kartaa adeegga. Laybareeriga i-Gurtida Mac ayaa weli ka mid ah iyada oo aan wax isbedel ah.
6. Waa maxay qalabka, taas oo music Apple loogu raaxaysan karaa?
Waxaad ku raaxaysan karaan Apple Music on iPhone, iPad, iPod taabto, taasoo waddaa on iOS8.4 ama qoraalkii ka dib. Xitaa Apple Watch 1.0.1 ama ka dib qoraalkii la jaanqaadaan hawlaha geeyo Apple Music. Orodka PC ee Lugood iyo Macs sidoo kale ka ciyaari music Apple haddii lagu rakibay. Ugu dambeeyey waa TV Android iyo Apple, laakiin ay weli tahay si aad u hesho ka mid ah dadka isticmaala ay yaqaanaan.
7. Ma suurogalbaa in ay helaan music Apple oo ku kale i-qeybiyo cusub in ay yihiin oo kaliya bilaabay?
Waxaa suurtogal ma aha in ay helaan music Apple oo ku kale i-qeybiyo cusub in ay yihiin oo kaliya bilaabay; kaliya iPod taabto waa socon oo aan ahayn kuwa kale. Noqon Apple hadli doono dhibaatada ugu dhaqsaha badan laga yaabaa.
8. Sidee baa nin keliya heli Apple music dhex Apple Daawo karaa?
Sida heesaha oo ku kaydsan yihiin degaanka on watch Apple ah, aad u hagaagsan kartaa music ka maktabadda Apple oo ku raaxaysan.
9. Sidee Music Apple ah waxaa laga heli karaa?
Waxaad u baahan tahay inaad kala soo baxdo i-OS 8.4 updates adigoo raacaya taallaabooyinka: Settings> General> Software Update. Markaas waxaad si uu u furo app Music iyo shaqadaada waxaa lagu sameeyaa.
10. Ma Apple sii socotay inay meel music ee maktabad kasta oo muusiko ku gaar ah?
Apple oo aan ka dhigi doonaa music ee maktabadda wax music on gaar ah. Waxaad u baahan doontaa in geliyey music, kaas oo la soo bandhigi doonaa in aad maktabadda. Waxaa laga yaabaa in playlists soo jeediyay haddii aad heshiiska si Apple.
11. Ma Apple Music DRM-xiran?
Haa, sababo ammaan. Digital Rights Management waxaa laga codsadaa in ay wax song ka saarney Apple. DRM waxaa laga codsadaa si ay u hubiyaan in aad kaliya saxiixin ha ilaa download songs dibna burin Times aad. Waxaad ma ahan oo keliya cararay karaa music ka Music Apple.
12. Waa maxay xiriirka ka dhexeeya Apple Music iyo Lugood Radio iyo sidoo kale Lugood Store?
Ma jiro wax ka badan Lugood Radio oo waxaa la bedelay Beats, waa nool iyo dalabyada hoorto 24/7. Labada iyaga ka mid ah ku siin ikhtiyaar ah in la abuuro saldhig kartoo Apple Music radio.
13. Sidee music Habee jirto soo socda si ay u adeegidda geeyo?
Waxay ka jiraan ma ahan oo keliya sida "socda", laakiin sidoo kale qaab ah lagu daray. Waxaad heli kartaa in aad ururinta music dhawaan ka jirta iCloud iyo sidoo kale ku darto wax ka music Apple ilaa maktabadaha Diintiinii.
14. Waa maxay fursadaha of Lugood u PC iyo Mac?
Waxaa la mid ah ayaa la Lugood 12 oo ay la socdaan koox cusub top-tab. Wax yar ayaa sida Playlists iyo Lugood Store RIGA waa isku mid oo bedeli kaliya kulanka ay la socdaan Radio leh cusub afar isha ku macruufka, waayo, waxaad, Radio, New iyo Connect.
15. Ma suurogalbaa in gubi Apple Music heesahaaga CD ah?
Waxaa suurtogal ma aha in aad nuqulka Apple Music heesahaaga CD ah sidii loo aqoonsan karo sida xadid. Haddii aad soo bixi iyaga, waayo, offline isticmaalka sidoo kale, ka dibna waxa kale oo ay yihiin files protected.mp4. Sidaas ma waxaad gubi karaa CD.
Kalsoonow, kuwaas oo ah su'aalaha kaa caawin doona inaad si ay u fahmaan Apple Music Store fiican.
2 Easy Siyaabaha Download Music for iPhone Free
> Resource > Music > Apple Music Store FAQ: Wax walba oo aad u baahan tahay inaad ogaatid